जसपा र सरकारबीच आज पनि वार्ता, जसपाले माग्यो यी मन्त्रालय | सुदुरपश्चिम खबर
जसपा र सरकारबीच आज पनि वार्ता, जसपाले माग्यो यी मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७७ 3
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पनि जसपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच शुक्रबार पनि वार्ता हुँदैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न चार बजे वार्ता हुने जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
शुक्रबारको वार्ता निर्णायक हुने नेताहरुले बताएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागीतामा भएको छलफलमा शुक्रबार कार्यदलस्तरमा निर्णायक छलफल गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले यो वार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
जसपा नेता कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले राखेका मागहरुमा सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । सोही आधारमा शुक्रबारको वार्ता टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । जसपाले निलम्वित सांसद टीकापुर घ ट नामा दा ेषी ठह र रेशम चौधरीको मु द्दा फिर्ता र रि हाइ तथा मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सर्त राख्दै आएको छ ।
आफ्ना माग सम्बोधनका लागि जसपाले कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई कार्यदलमा छन् ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइ राख्न थप १८ सांसद आवश्यक पर्दछ । निलम्वितबाहेक ३२ सांसद रहेका जसपाको एउटा खेमालाई भए पनि साथ लिने रणनीतिमा ओली छन् ।
जसपाले रक्षा, गृहसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागेको स्रोतले जनाएको छ । रेशमको रिहाइ लगत्तै मन्त्री दिने जसपाभित्र सहमति भइसकेको छ । ओकेजनता डेस्क
सरकारले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने